Jaceyl Hadal Mafahmo - QeyloNET Somali Media Portal
Jaceyl Hadal Mafahmo
Director: Bahadır İnce, Çağrı Bayrak, Müge Uğurlar, Tarık Erkan
Actors: Betül Çobanoğlu, Birand Tunca, Bülent Emrah Parlak, Burak Deniz, Cem Emüler, Demet Gül, Evren Duyal, Gözde Kocaoğlu, Hande Erçel, Merve Çağıran, Nazan Diper, Oğuzhan Karbi, Özcan Tekdemir, Süleyman Felek, Sultan Köroğlu Kiliç
Studio: Bi Yapım, Yagmur Ünal
Networks: Show TV, Star TV
Leave a Reply to Abdimahad Abdullahi Abdille Cancel reply
please ma nogu so dari kartin filmka xad la’an
Abdimahad Abdullahi Abdille
Film kham tiisa wata weeyi
Udgoonkii jaceylka ma noogu badali kartin idinkoo raali ah
September 26, 2020 at 8:44 pm
monica ina haji
adpan ujecelay filimkan thnkx
haye waan jeclahay filimkan aad ayuu ufiican yahay .
Edinko raliah manoso denkartana filimkana inadina ask
Sunta waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow asagoo dhameystiran ka...
Midnimo Jaceyl waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow asagoo dhameystiran...
h6 Q-Xalqada 160-Dhamaad Q-Xalqada 159 Q-Xalqada 158 Q-Xalqada 157 Q-Xalqada 156 Q-Xalqada 155 Q-Xalqada 154 Q-Xalqada 153 Q-Xalqada 152 Q-Xalqada 151 Q-Xalqada 150 Q-Xalqada 149
Trailer: Jaceyl Hadal Mafahmo